Madaxweynaha China oo ku baaqay dagaal ka dhan ah fayrus-ka Corona
Xanuunkaan dilaaga ah ayaa ka dhasha cunista duur-joogta sida Kibiliga.
BEJING, China - Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ku dhawaaqay in dadka ay qaadaan dagaal ka dhan ah xanuunka Fayrus-ka Corona, kaas oo dhimashada uu dhaliyay ay sii kordheyso maalinba maalinta ka dambeysa.
Wakaalada wararka dawlada Shiinaha ee Xinhua oo soo xiganaysa hogaamiyaha dalkaasi ayaa tiri "Waddanka oo dhan ayaa awooddooda kaga falceliyay si ay uga jawaabaan si guud iyo in laga hortago lana qaado talaabooyin lagu xakamaynayo, iyadoo laga billaabayo in lala dagaalamo inuu dadka ku dhex faafo."
Sidda dhaqanka Soomaalida "caqabad ugu yahay ka hortaga Corona"
Soomaliya 28.03.2020. 12:00
Dhaqanka Soomaalida ayaa la sheegay in uu "qeyb ka qaadan karo" faafitaanka xanuunka, hadii bulshada isbedel la imaan.
Qof Soomaali ah oo Masar ugu geeriyooday fayruska Corona
Soomaliya 27.03.2020. 12:30
Puntland oo go'aan kasoo saartay cudurka ka dilaacay Shiinaha
Puntland 30.01.2020. 16:25
Madaxweynaha Shiinaha oo booqasho taariikhi ah ku tagay UAE
Caalamka 20.07.2018. 02:31